Minneapolis Oo Lagu Soo Rogay Bandoo, Halka Askarigii Dilka U Geystay Ninka Madow Lagu Oogayo Dilka Darajada 3aad – HCTV
Ahmed Cige 0	May 29, 2020 10:42 pm
Qofkii Ugu Horeeyey Oo Coronavirus Ugu Geeriyooday Meel Ka Baxsan Shiinaha
Minneapolis, (HCTV) – Duqa magaalada Minneapolis ayaa soo rogay bandoow Jimcihii, ka dib markii xeer ilaaliyaha gobolka uu go’aamiyey in shaqada laga eryo sarkaal booliis ah oo lagu arkay muuqaal Video ah isaga oo jilibkiisa qoorta kaga haya George Floyd oo ah nin madow oo aakhirkii u geeriyooday falkaasi.
“Waxaanu fileynay xukun dil ah oo heerka koowaad ah. Waxaan doonaynaa xukun dil ah oo heerka koowaad ah. Waxaan kaloo doonaynaa inaan aragno saraakiisha kale oo la xidhay,” ayuu yidh Crump oo ah qareenka iyo qoyska ninka madow oo qoraal soo saaray. “Waxaanu ugu baaqaynaa mas’uuliyiinta inay dib u eegaan dacwadaha si ay uga tarjumaan mas’uuliyadda dhabta ah ee sarkaalkan.”
Dilka ninka Madowga ah ee George Floyd oo dibadbaxyo rabshado wata oo gilgilay magaalooyinka dalka Maraykanka waxa ay keentay in lagu soo rogo bandoo magaalada Minneapolis oo rabshadaha ugu badan ay ka dhaceen.